भोली विप्लवको बन्द तर नेपाल बन्द होईन कुन-कुन जिल्लाको लागि हो ? [हेर्नुहोस् विज्ञप्ति] – ताजा समाचार
भोली विप्लवको बन्द तर नेपाल बन्द होईन कुन-कुन जिल्लाको लागि हो ? [हेर्नुहोस् विज्ञप्ति]
काठमाडौं । नेत्र विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले भोली बन्द भएको तर नेपाल बन्द नभएको जनाएको छ । आफ्ना केन्द्रीय सदस्य एवम् उपत्यका ब्युरो ईन्चार्ज माईला लामा गि’रफ्तारीको बिरोधमा भोली बाग्मती, नारायणी ब्युरो सहित जनकपुर ब्युरो अन्तर्गतका जिल्लामा बन्दको आह्वान गरेको जनाएको छ । सरकारले निरन्तर आफ्ना नेता र कार्यकर्तालाई गिर’फ्तार गर्ने , झुठा मुद्दामा फ़साउदै जेलमा कोच्ने र मुठ’भेड को नाममा ह’त्या गर्ने गरेकोले नेकपा आक्रो’शित भएको हो ।
सरकाररको दमन र धरपकड बिरुद्ध भोलीआव्हान गरिएको बन्द कडा हुने उक्त पार्टीले जनाएको छ । बन्दको आव्हान गर्दै नेकपा प्रवक्ता प्रकाण्डले जारी गरेको विज्ञप्तिमा संघर्षको कार्यक्रम अन्तर्गत जनप्रतिरोध र जनकारबाहीको समेत उल्लेख भएकोले भोलीको बन्द फरक किसिमको हुने बुझिएको छ । यस बिषयमा प्रवक्ता प्रकाण्डद्वारा जारी विज्ञप्तिमा, ‘२०६२–०६३ सालमा भएको शान्ति वार्ताको नाममा प्रचण्ड–बाबुरामको बेइमानी र पलायन, संसदवादीहरुको यथास्थितिवादी चिन्तन र विदेशी शक्ति केन्द्रको हस्तक्षेपमा देश र जनतामाथि प्रतिक्रान्ति लादियो ।
त्यसको विरुद्ध हाम्रो पार्टीले लगातार संघर्ष गर्दै आएको छ । देश राजनीतिक संकटतिर झन्झन् फस्दै गएको छ । हाम्रो पार्टीमाथिको प्रतिबन्धले ओली सरकार राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय रुपले नाङ्गिएको र संकटमा परेको छ । त्यही संकटमाथि पर्दा हाल्न वार्ताको हल्ला गरेको छ । सरकारको वार्ताको हल्लाभित्र पार्टी र जनक्रान्ति दमन गर्ने भयानक षड्यन्त्र बाहेक अरु केही छैन । त्यसकारण दमन, षड्यन्त्र र ह’त्या बन्द गर्न चेतावनी सहित निम्न संघर्षका कार्यक्रम घोषणा गर्दछ ।’